Mergify: mhinduro hombe yekugadzirisa GitHub kusangana zvikumbiro | Linux Vakapindwa muropa
Mergify: mhinduro hombe yekugadzirisa GitHub yekubatanidza zvikumbiro
Mergify ndeye automation sevhisi inosanganisa GitHub dhonza chikumbiro otomatiki. Tsanangura yako mitemo, uye nekukurumidza kodhi yako ikagadzirira kubatanidzwa, izvi zvichaitwa neMergify, saka hapana chikonzero chekuzviita nemaoko.
Mergify vhezheni 2 yakaburitswa nguva pfupi yadarika chinova chishandiso chakanakisa chekubatsira vanogadzira kushandisa GitHub nezvikumbiro zvayo zvekubatanidza.
Vazhinji vagadziri vanoshandisa GitHub vanoshandisa zvikumbiro zvekubatanidza kugadzirisa kodhi iri mune yavo sosi repositi.
Ndiwo zvakare kureruka kwekuvhura zvikumbiro zvitsva izvo zvave chimwe chebudiriro yeGitHub pakutanga.
Nekudaro, lkubatanidza zvikumbiro zvave zvehunyanzvi, zvinosanganisira huwandu hweruzivo uye anoramba achibatanidza masystem (Travis CI, Circle CI, nezvimwewo).
Nekuda kweizvozvo, zvakati omei kumapurojekiti ekugadzirisa zvikumbiro zvekubatanidza, mazhinji acho achigadzira marobhoti ekuvabatsira.. CPython, semuenzaniso, akanyora robot inonzi Miss Islington kuvabatsira kugadzirisa kukanganisa kwavo.
1 Nezve Mergify
1.2 Shandisa Mergify mune yako repository
2 Ungawana sei Kubatanidza?
Iyo Mergify chirongwa chakazvarwa kubva pane ichi cherechedzo uye chinopa chirongwa chinogadzirisika robhoti iyo inogona kushandiswa kushandisa nzira dzakasiyana dzekutarisira nekutarisira zvikumbiro zvekubatanidza.. Iyo purojekiti ine rezinesi pasi peApache 2.0 rezinesi uye inoshandisa GitHub kusimudzira.
Dambudziko rinodzokororwa nderekusanganisa otomatiki kwechikumbiro chekudhonza kana zvimwe zviyero zvikaenderana.
Semuenzaniso, vagadziri vanoda kuisa kodhi kodhi kana iyo yekubatanidza system ichienderera ichisimbisa shanduko.
Kana chikumbiro chekubatanidza chikangowirirana neyako maitiro, iyo Mergify injini inosanganisa iyo kodhi shanduko.
Kubatanidza kunopa yakazara mishumo yezviito iwe zvauchatora pane cheki chebhu yezvikumbiro zvekubatanidza:
Kubatanidza kunopa zviito zvakasiyana
Zvese izvi zviito zvinogona kusanganiswa uye kushandiswa pamhando dzakasiyana dzekubatanidza nzira dzekukumbira, senge zita, munyori, ma tag, huwandu hwemafaira akagadziridzwa, zvichingodaro.
batanidza inogona kuitirwa pane yako wega server kana inogona kushandiswa kuburikidza ne Mergify.io chikuva iyo inopa iyo yakachengetwa sevhisi yevashandisi uye yemahara kune yakavhurwa sosi mapurojekiti.
Mergify ine rutsigiro rwe Mergify Travis Cl, CircleCI, Jenkins, Codecov, nezvimwe. Paunenge uchiita zvekudhonza zvikumbiro, Mergify ichaisa chinzvimbo chekuzvipira chinoenderana nemitemo yako.
Shandisa Mergify mune yako repository
Mergify ndeye Github application iyo inodzora zvese zvinokweva zvikumbiro zvinotumirwa kune yako repository.
Ungawana sei Kubatanidza?
Izvo zvakakosha kutaura izvozvo Kubatanidza kune yemahara uye yakabhadharwa vhezheni, kupi mutsauko ndewokuti mushanduro yakabhadharwa iwe unenge uine rutsigiro rwakananga kubva kune vanogadzira Mergify.
Paunenge uri musununguko yemahara iwe unogona chete kugamuchira rutsigiro kubva munharaunda. Chekupedzisira, mutengo weiyo yakabhadharwa vhezheni ingori $ 2 pamushandisi.
Kunyangwe mune zvikwata zvevashandi, mutengo uri madhora mashanu emadhora enhengo shanu dzekutanga dzechikwata. Ichokwadi mutengo unosvikika uye unonzwisisika.
Kushanda, Kubatanidza kunoda kuwanikwa kuaccount yako uye kunofanirwa kuve kunogoneswa. Kuti vaite kudaro, vanofanirwa kupinda neakaundi yavo yeGitHub muMergify., izvo zvinogona kuitwa Mune inotevera chinongedzo.
Iye zvino pakutangisa kwekutanga, Iwe uchakumbirwa kuti upe zvimwe mvumo pachinzvimbo chako kuitira kuti Mergify ishande.
Paunenge wapedza, iwe unofanirwa kugonesa iyo Mergify GitHub app mune zvinyorwa zvaunoda. Kune izvo ivo vanofanirwa kuenda kune anotevera link Uye pano ivo vanofanirwa kuwedzera ese iwo matura uko kwavanoda kuti Mergify iitwe.
Kuti Mergify ishandise mirau yayo kune zvaunodhonza zvikumbiro, unofanirwa kugadzira faira rekumisikidza. Iyo yekumisikidza faira inofanirwa kugadzirwa mumidzi dhairekitori yeyakagoneswa repositi uye inonzi .mergify.yml.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kushanyira iyo webhusaiti webhusaiti. Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Mergify: mhinduro hombe yekugadzirisa GitHub yekubatanidza zvikumbiro
Linux paDeX mu beta, pano isu tinokuudza maitiro ekutora chikamu
Kupona Mars: Space Race inotangisa Mbudzi 15 yeLinux